Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 26, 2020 07: 07 No Comments
Xitaa haddii unicornku kicin doono xiisaha qorayaasha sida falsafada Aristotle ama Pliny Odayga kaas oo soo bandhigi doona sawir dhammaystiran, Unicorn wuxuu qaadan doonaa ku dhawaad ​​2000 sanadood inuu isdilo sababta oo ah ilaha laga sheegayo tilmaantaasi waxay ahaayeen kuwo naadir ah gaar ahaanna is burinaya .
Laga soo bilaabo halabuurka, xayawaanka baqdinta leh, ilaa faraska loo yaqaan 'faraska', astaamaha muuqaalka jirka iyo astaamaha ee la xiriira geeskiisa sixirka, loo qoondeeyey astaamaha mucjisada ah, ma joojin doonto isbeddelada, taasoo ka dhigeysa inay sii dhex marto dhammaan midabbada si ay u soo gasho caddaanka taas oo ah rabitaanka ah inuu naftiisa ku soo rogo dhamaadka qarniyadii dhexe, isagoo noqonaya astaanta daahirsanaanta iyo is-dhawridda oo inta badan lala xidhiidho marwada la socota, isaga oo muujinaya jacayl aan macquul ahayn, waxyaalaha qarsoon ee jidhku leeyahay, doonistii buuxda.
Wixii intaa ka dambeeyay, buugga buurku wuxuu ka badbaaday qarniyo ilaa maanta, halkaas oo uu ku sii dhiirrigelinayo qorayaasha, ha noqoto filimaan xiiseeya, internetka ama sheekooyinka khayaaliga ah. Ka fog inuu noqdo astaan ​​caan ah, xayawaankan cajiibka ah, ee lagu qurxiyo sixir iyo sixir, waa qeyb ka mid ah taariikhda aadanaha tan iyo markii lagu soo xusay dhowr jeer Axdiga Hore.
Quruxdiisu waa sida curadyada dibida dibigiisa, Oo geesihiisuna waa sidii geeso gisi, Oo wuxuu binu-aadmiga oo dhan ku dhufan doonaa tan iyo dunida meesha ugu dambaysa. "Sharciga Kunoqoshadiisa (33,17 - bogga 343)"
Kisangani: Kalluumeysiga cajiibka ah ee Wagenia ayaa dhaca, haddii Kisangani loo yaqaanno inuu yahay, magaalada saddexaad ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Kisangani sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa meelaha dalxiiskiisu u yahay mid soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh oo ka mid ah kuwa Wagenia Falls halkaas oo helo "Kalluumeysiga Wagenia"